Tattoo marwada gypsy | Tattoo
Naqshadeynta haweenka Gypsy, naqshad aad loo amaanay oo ku jirta qaabkii hore ee dugsiga
Fernando Prada | 14/07/2021 12:20 | Tattoos
Waa wax aan hore uga faallooday in ka badan hal munaasabad, qaab kasta oo loo yaqaan 'Tattoo' ayaa lala xiriiriyay iyaga oo ah taxane dhan oo astaamo iyo / ama walxo ah, sannadihii la soo dhaafay, oo la soo sawiray munaasabado badan, si dhakhso leh loola xiriiriyaa kuwa kala duwan qaababka loo yaqaan 'tattoos' ee aan maanta heli karno. Arinta Tattoo qaabka dugsiga hore, las dumarka jimicsiga, sidoo kale loo yaqaan Ingiriisiga sida Wiilasha jimicsiga, ayaa ka mid ah.
ka Naqshadaynta Haweenka Gypsy Waxay caan ku yihiin dadka jecel astaamaha dugsiyadii hore sababo la xiriira astaamahooda. Qaababkooda, dharkooda iyo qalabkooda waxay ka dhigayaan sawir gacmeedyadan si fudud isha isha. Tattoo-yadaani waxay had iyo jeer na tusayaan dumarka jimicsiga ku labisan oo ku labisan faahfaahin kala duwan iyo qurxin sida faraantiga suunka, hilqadaha, dulaalayaasha, garbasaarrada ama goonnada dhaadheer
1 Micnaha taatoobo loogu talagalay haweenka jimicsiga
2 Sawirrada Tattoos Haweenka Gypsy
Micnaha taatoobo loogu talagalay haweenka jimicsiga
El macnaha koowaad in aan siin karno noocan ah tattoos-yada ayaa ah kan madaxbanaanida iyo ismaamulka. Dadka qaata tattoo-ga jimicsiga ayaa badanaa ah dad madax-bannaan umana baahna inay la noolaadaan qof kasta si ay u dareemaan inay dhammaystiran yihiin, waxay kaloo leeyihiin xorriyad jireed iyo mid maskaxeed oo weyn.
El macnaha labaad waa taas socotada. Gypsies taariikh ahaan waxay ahaayeen bulsho safar ah. Weligaaba kolba dhinac u wareegaya raadinaya hab aad nolol uga kasbato magaalooyin iyo waddamo kala duwan oo adduunka ah. Dadka qaabkan leh badanaa waa dadka nasasho la'aan yaa jecel safarka iyo tacaburka dhanka aan la garanayn ama kali ama lasocod.
Un macnaha saddexaad ee tattoo guska waa naagnimo iyo rabitaan. Naqshadahan waxaa badanaa lagu sameeyaa haweeney timo madow jet iyo a midab casaan dhabannada kaasoo matala damiirnimada iyo dumarnimada haweenka guud ahaan. Sidoo kale waxaa badanaa lagu rinjiyeeyaa a midab casaan ah isagoo iftiiminaya rabitaan inay matalaan. Dadka ku sawira jimicsiga qaab-dhismeedka qaabkan badanaa dadka ololaya, qiiro leh iyo cidda ku jirta jinsi iyo rabitaan wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa xiriiradaada shaqsiyadeed inta badan.
Macnaha kale ugu badan ee noocan ah tattoos yihiin mustaqbalka, faal, nasiib, jacayl ama dariiqa aan la garanayn… Dhammaantood waxay kuxiran yihiin nolosha jiifka iyo dhaqanka sidaan ku ogaanay sheekooyinkooda iyo halyeeyadooda. Qeyb weyn oo ka mid ah tattoos-ka haweenka gypsy ayaa lagu sameeyaa midkan oo haysta a kubad diiriye, taas oo uu u adeegsado inuu ka sii qaado mustaqbalka qofka isaga weydiiya mustaqbalkiisa. Sidoo kale waa lagu sawiri karaa kaararka tarot ama asalka xiddigta, dhammaantood waxaa loo isticmaalaa farshaxannimada.
Sida aad u arki karto, tattoos-yada 'gypsy' ayaa badanaa aad u ballaaran sababtoo ah cadadka faahfaahinta in ay ku wataan qaabkooda. Sawir gacmeedka noocan ah ayaa badanaa lagu sawiraa dhabarka, afarleyda, ama lugaha guud ahaan dhudhunka iyo gacmaha ama xitaa ku jira gadaasha gacmaha...inbadan ama kayar halkaas oo farshaxanku ka samayn karo shaqo runtii u muuqata qurux iyo faahfaahinteeda oo dhan. Waa la wada ogyahay in taatuuga, waqti ka dib, u muuqdo inuu lumiyo faahfaahin haddii haday aad u yartahayna dhamaadka waxay umuuqataa inay tahay meel maqaarka ku taal. Tani waxay sidoo kale ku dhici laheyd naqshadahan; isagoo leh faahfaahin aad u badan, sanadihii la soo dhaafay, waxay ku dhammaan lahaayeen in la lumiyo wixii maqaarka lagu sawirona lama aqoonsan lahaa.
Sababtoo ah astaamahan, tattoos-yadaas waxaa badanaa xidha ragga maaddaama ay yihiin kuwa inta badan doorta qaybo waaweyn ama mug leh. Caadi ahaan, haweenku waxay doorbidaan qaybo badan ganaax oo yar inkasta oo had iyo jeer ay jiraan waxyaabo ka reeban oo ah shaqo farshaxan oo run ah.
Hadaad tahay taageere tan dhaqanka si gaar ah oo hodan ahShaki la'aan, habka ugu wanaagsan ee marwalba oo yar oo annaga ah nalala qaado waa inaan ku qabanno mid ka mid ah astaamahaas maqaarkaaga. Haddii aad raadiso shabaqa, waad arki doontaa taas Tirada ugu badan ee tatooyada haweenka jimicsiga ayaa had iyo jeer raaca qaabab isku mid ah. Sawir muuqaal ah oo leh dhabannada cas iyo timo madow. In kasta oo aan ka heli karno noocyo badan oo noocan ah tattoos-ka ah internetka.
Ama leh a kubad diiriye, madaxa-saar, baalal ama kaararka tarotka qaarkood, Gypsy haweenka tattoos marwalba waa xulasho wanaagsan oo loogu talagalay kuwa jecel kuwa qaabka Dugsi duq ah.
Si kastaba ha ahaatee, Aniga shakhsiyan waxaan dooran lahaa inaan siiyo tattooka taabasho shaqsiyeed ama iyadoo la adeegsanayo kaabis ama iyada oo la isku daro waxyaabo kale sida ubax, dhakada ama xayawaan kasta oo waliba macno shaqsiyadeed inoo leh. Marka laga hadlayo booska jirka ee timahani ay sifiican ugu eegi karaan, sidaan horay u soo sheegnayba, waxaa laga door bidaa aagag waaweyn oo faahfaahinta laga bogi karo laakiin, guud ahaan, waa naqshado si fiican ula jaan qaada ku dhowaad qayb kasta oo jirka ah. halkaas oo aan go'aansano inaan ku sawirno.
Sida had iyo jeer ah, waxaannu kuu daynaynaa xulasho yar oo sawirro ah oo lagu xardhay xaragada haweenka 'gypsy' oo aad ka heli karto fikradaha ballantaada dambe khad iyo irbad.
Sawirrada Tattoos Haweenka Gypsy
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos » Naqshadeynta haweenka Gypsy, naqshad aad loo amaanay oo ku jirta qaabkii hore ee dugsiga
Tattoo Scorpion leh ubaxyo: isku dhaf aan la filayn
Tattoos of Roses iyo daggers: ururinta naqshadaha